प्रचण्डकाे हत्या योजना झुटा हो , आफु चर्चामा आउने दाउ मात्रै हो | यो दलाल, कमिसनखोर, ठग, तस्कर, भ्रष्टाचारीहरूको सरकार रहेछ: विप्लव - VOICE OF NEPAL
३१ बैशाख २०७६, मंगलवार ०७:४२ 166 ??? ???????
यो राज्यले हाम्रो पार्टी र मुक्तिकामी जनताविरुद्ध लादेको फाँसीवादी प्रतिबन्धको प्रतिरोध हो। जस्तालाई त्यस्तै जवाफ दिन हाम्रो स्थायी समितिले यो निर्णय गरेको हो। राज्य बलजफ्ती आउने हो भने उसले पनि कडा प्रतिरोधको सामना गर्नुपर्नेछ।
यो एकदमै झूटो प्रचार हो। पहिलो कुरा, सरकारले हामीलाई आधिकारिक ढंगले वार्तामा बोलाएको होइन, त्यस अर्थमा वार्तामा आएन भन्न मिलेन। दोस्रो– वार्ताबाट त हामी फर्किंदै छौं। जतिबेलासम्म वार्ताबाट जनअधिकार र देशका प्रस्तावहरू पास होलान् भन्ने थियो त्यसबेलासम्म त प्रचण्डहरूसहित हामी वार्तामै थियौं नि। तर जब वार्ताका नाममा जनयुद्धका सारा प्रस्ताव र उपलब्धिलाई खरानी पार्न थालियो, देशलाई पराधीन र जनतालाई अधिकारविहीन बनाउन थालियो तब न हामीले विद्रोह गरेका हौं। आज पनि वार्ताबाट न हामी तर्सिन्छौं न त वार्ताले क्रान्तिले उठाएका विषयलाई समाधान गरिहाल्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं। जहाँसम्म वार्तामा नआएर हिंसामा गएको भन्ने प्रचार छ, यो त पूरै गलत प्रचार हो। हामीले त देश डुबाउने एनसेल, मानव तस्कर, महिलालाई बोक्सीको आरोप लगाउने फटाहा र मजदुरलाई दमन गर्ने मालिकविरुद्ध कारबाही गरेका थियौं। यसमा प्रतिबन्ध लगाउन मिल्छ ?
सोमनाथ पाण्डे नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोलीसँग कुन चरणसम्म तपाईंहरूको वार्ता/संवाद भएको थियो ?
वार्ताको कुरा नै नभएको स्थितिमा यहाँ हाम्रो विषय के हुन् भनेर चर्चा गर्नुको के अर्थ छ र ? तैपनि छोटोमा भन्दा हामी देशबाट दलाल पुँजीपति वर्गले जसरी आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, बजार, जमिन, शिक्षा, स्वास्थ्य सारा कब्जा गरेर देशलाई टाट पल्टाउँदै र जनतालाई कंगाल बनाउँदै छ, त्यसको अन्त्य चाहन्छौं। हामी त दलाल पुँजीवादी सत्तालाई मिल्काउन क्रान्तिको मार्गमा छौं नि।
यति गम्भीर विषयलाई बजारको व्यापार गराइएको छ, यो नै अनौठो लाग्छ। यो प्रस्ट कुरा हो कि राज्यले हाम्रा नेताहरूलाई इन्काउन्टरसम्मको योजना बनाएर शक्ति सञ्चालन गरेको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ।
पत्रकार मित्र, कुरा हिंसा–हत्याको होइन, क्रान्तिको हो। हाम्रो देशलाई स्वाधीन बनाउन, देशका श्रमिक जनतालाई राज्यसत्ताको मालिक बनाउन, सबै उत्पीडित, शोषित, दमित श्रमिक वर्ग र जनतालाई मुक्त गर्न दलाल पुँजीवादी सत्तालाई मिल्काउने र वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने उद्देश्य हो। क्रान्ति त्यस्तो एकीकृत संघर्षको कूल योग हो, जहाँ सबै संघर्षका रूपहरू अनिवार्य हुन्छन्। हामीले जे कारबाही गरेका छौं, प्रस्टै जिम्मा लिएका छौं नि, कहाँ छ भ्रम ?
सेना भनेको राज्यसत्ता प्राप्तिका लागि संघर्षरत श्रमिक जनतालाई सफल बनाउन लड्ने शक्ति हो। जनमुक्ति सेना भनेको सबै उमेरका नरनारी आफ्नो अधिकार र मुक्तिका लागि भाग लिने सेना हो। प्रचण्डहरू र एमाले—कांग्रेसहरू मिलेर विसर्जन गर्न खोजेपछि हामीले त्यतिबेलै भनेका थियौं जनमुक्ति सेनाको आवश्यकता सकिएको छैन। यो आवश्यक छ, हुनेछ र संगठित गरिनेछ। त्यही भएको हो अरू के हो र ?
त्यस्ता सर्त र प्रस्तावबारे हामीलाई कुनै जानकारी छैन। तर वार्ता गर्ने भनेपछि प्रस्ताव त पक्कै भइ नै हाल्छन् नि। वार्ता नभएको स्थितिमा कसरी थाहा हुन्छ र ?
राजनीतिक छलफल आवश्यक र सम्भव भएमा मुद्दाअनुसार जोसँग पनि हुन सक्छ। हामीले छलफललाई सहज बनाएका छौं। यसबारेमा धेरै कुरा गरिहाल्नुपर्ने खास विषय केही छैनन्।
एकताका सम्भावना छन् तर मैले माथि भनिसकें कि विचार—राजनीति र कार्यदिशा मिलेपछि एकता हुन्छ।
तपाईंले भन्नुभएको सही हो– जनताले द्वन्द्व थेग्न सक्दैनन्। त्यसैले त हामीले ६५—६६ सालदेखि नै भन्दै आएका छौं– पुँजीवादी, दलाल पुँजीवादी, संशोधनवादी, अवसरवादी, विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले जनतालाई जनयुद्धका उपलब्धिबाट पछाडि फकाएर जानाजान द्वन्द्व भड्काउँदै छन्।
हेर्नुस्, हामीले एकीकृत जनक्रान्तिको कुरा केवल पार्टीको हितका लागि गरेका छैनौं। आज दलाल पुँजीवादी सत्ताको कारणले कम्युनिस्ट, वामपन्थी, देशभक्त, लोकतन्त्रवादी सबै आक्रान्त छौं। कुनै एक शक्ति एक्लै लडेर यसको पार लाग्दैन। हामी सबै मिलेर देशमा आजसम्म प्राप्त हुन नसकेको वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने दिशामा गयौं भने सबै जनताको उद्देश्य पूरा हुनेछ। कम्तीमा हाम्रै खुट्टामा उभिएर आफ्नै देशबारेमा सोच्न सक्ने छौं।